Niger: afar askari ayaa lagu diley aaladda waxyaabaha qarxa ee gobolka Diffa - JeuneAfrique.com - KU SOO DHAWEYN
ACCUEIL » SIYAASADDA »Niger: Afar askari ayaa lagu diley aaladda waxyaabaha qarxa ee gobolka Diffa - JeuneAfrique.com
Afar kamid ah askarta Nigeria ayaa ladilay iyagoo wata gaarigooda iyagoo wata gaari waxyaabaha qarxa ah meel u dhow Bosso, oo ah magaalo ku taal koonfur-bari Niger, bartilmaameed joogto ah oo ay ka geystaan ​​kooxda xagjirka ah ee Nigeria Boko Haram, ilo wareedyo xagga amniga ayaa sheegay Talaadadii 13 August.
“Afar kamid ah ciidamadeena ayaa runtii dhintey markii gaarigooda uu ku dul booday aaladda waxyaabaha qarxa ee udhaxeysa magaalooyinka Toummour iyo Bosso”, ee gobolka Diffa, una dhaw dalka Nigeria, ayaa laga soo xigtay ilo amni gudaha ah.
"Dhacdadu waxay dhacday Sabtidii hore laakiin lama shaacin ilaa Talaadada, sababta oo ah xafladda Ciidul-Kebir ayaa loo dabaaldegay Axadda iyo Isniinta Niger," ayaa laga soo xigtay ilo-wareedka. Afarta askari ee la dilay waxay ka tirsanaayeen Xoogagga Wadajirka ah ee Dhaqamada kala duwan (Niger, Nigeria, Chad iyo Cameroon) oo ka howl gala 2015 harada Lake Basin ee ka dhanka ah Boko Haram.
Diffa, gobolka bartilmaameedka Boko Haram
La gobolka Diffa waa tan iyo 2015 goobta weerarada Boko Haram, kuwaas oo dagaal yahaniintooda laftoodu ku dhegeen sariirta harada Lake Chad. Bishii Agoosto 2, Madaxweynaha Niger, Mahamadou Issoufou, wuxuu ka qoomameeyay "in kasta oo ay jiraan howlo militari", "Boko Haram nasiib darro waxay muujineysaa adkeysi" in "ciidamadeena ay tahay inay jabiyaan kharash kasta".
Toddobaadkii la soo dhaafay shir ka dhacay Niamey, saraakiisha militariga ee afarta dal ee xaduudka la leh Lake Chad iyo xulafadooda reer galbeedka waxay go’aansadeen inay si wanaagsan u abaabulaan sirdoonka si ay si hufan ula dagaallamaan Boko Haram.